Kuuriyada Waqooyi oo gantaalkii 3 tijaabisay 3 toddobaad gudahood - BBC News Somali
Kuuriyada Waqooyi oo gantaalkii 3 tijaabisay 3 toddobaad gudahood
Image caption Tijaabada gantaalkani wuxuu imaanaya maalin uun ka dib markii hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu dusha kala socday tijaabo lagu samayeeyay hannaanka difaaca diyaaradaha
Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabisay gantaal riddo gaaban, kaas oo u muuqda in uu yahay midkii saddexaad ee ay ku guulaystaan muddo todobaadyo ah.
Gantaalka ayaa hawada ku jiray 450 kiiloo mitir ka hor inta uusan ku soo dhicin biyaha Japan, arrintaas oo durba sababtay in Japan ay ka cabato.
Dadka wax indha indheeya waxay sheegayaan in tijaabooyinkan gantaalladu ay tilmaamayaan in Waqooyigu uu horumar ka sameeyay gantaalaha xambaaraha madayada sida nukliyeerka.
Waqooyiga ayaa si joogto ah uga dhago adaygta qaraarka Qaramada Midoobay ee ka mamnuucaya dhamaan falalka la xiriira hubka nukliyeerka ah iyo gantaallada, bilihii u dambeeyayna sare ayay u qaadeen tijaabooyinka gantaalada ee ay samaynayaan.
Image caption Kim Jong-un oo ah ninka shaatiga cad ee dhexda ku jira ayaa lagu warramay in uu daawaday tijaabada hannaanka difaaca diyaaradaha isaga oo ay ku weheliyaan saraakiisha ugu sarraysa dalkaas.
Taliska ciidammada ee badda Pacific ee dalka Maraykanka ayaa sheegay in gantaalka laga riday Wonsan oo ku taalla Waqooyiga Kuuriya uuna hawada ku jiray qiyaas lix daqiiqo ah ka hor intii uusan soo dhicin.
Xoghayaha gollaha wasiirrada ee Japan Yoshihide Suga ayaa saxafiyiinta u sheegay in goobta uu gantaalku ku dhacay ay u dhaxayso jasiiradda Oki islands iyo Sado.
Afhayeen u hadlay milatariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in gantaalku uu gaadhay 120 kiiloo mitir ayna qiimaynayaan tirada rasmiga ah ee la riday, iyaga oo bidhaamiyay in la tijaabiyay wax hal gantaal ka badan.
Tijaabada gantaalkani wuxuu imaanaya maalin uun ka dib markii hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu dusha kala socday tijaabo lagu samayeeyay hannaanka difaaca diyaaradaha.
Kuuriyada Waqooyi oo gantaal cusub tijaabisay
Netanyahu oo Iran ku eedeeyay tijaabinta gantaal
Image caption Gantaallada Scud oo ay leeyihiin Kuuriyada Waqooyi